मिस शेर्पाले निरन्तरता पाउने « Sherpa media Group Nepal
मिस शेर्पाले निरन्तरता पाउने
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७४, आईतवार ११:५४
मिस शेर्पाले पूर्ण निरन्तरता पाउने भएको छ । डिपास ईन्टरनेश्नल प्रा. लि. ले आयोजना गर्न लागेको मिस शेर्पा २०१७ का लागि समुदायमा पहिलो बैठक सम्पन्न भएको हो । नेपाल शेर्पा संघ लगायत अन्य शेर्पा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले यसलाई निरन्तरता र दिर्गाकालिन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
शेर्पा समुदायमा सन् २०१० बाट सुरु भएको मिस शेर्पा प्रतियोगित केही बर्ष पश्चात आयोजना गर्न नसकि रहेकोमा डिपास ईन्टरनेशनल प्रा.लि ले यसलाई निरन्तरता दिने भएको हो । शेर्पा समुदायमा शेर्पा युवा महिलाहरुको प्रतिभालाई विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्ने गरेको मिस शेर्पाले २०१२ बाट निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । शेर्पा समुदायलाई विश्वसामु चिनाउने र नेपालको पर्यटनलाई प्रवद्धन गर्ने उद्देश्य समेत रखेको प्रतियोगिता समुदायको चासोको बिषय पनि हो ।
मिस शेर्पालाई निरन्तरता दिन र यसलाई प्रभावकारी भनाउन सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको साथ र सहकार्यबाट नै सफल हुने हुनाले यसलाई निरन्टतरता पाउनेमा शेर्पा समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको छ । डिपास ईन्टरनेशनल प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक छे ल्हमु शेर्पाले सल्लाह सुझाव साथै सहायकार्यको लागि सबैलाइ आग्रह गर्नु भएको छ ।
तस्बिर ः ङिमा तेन्डी शेर्पा